मध्यरातमा के के सहमति भयो डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीच? हेर्नुस् ८ बुँदे सहमति पत्र - Halkara News
हल्कारान्यूज २५ आश्विन २०७७, आईतवार ०८:१० 1212 पटक हेरिएको
काठमाडौं । अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीच शनिबार मध्यराती आठ बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै डा. केसीले २७ दिनदेखिको आमरण अनसन आज (आइतबार) अन्त्य गर्ने भएका छन्।
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा शनिबार मध्यराती डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपी मैनालीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।